Tao amin’ny Fitsarana Ambony Mba Mpisolovava ny Bologna
Ao ny daty, ny sivy volana jolay, fomba ofisialy ny nametraka ny FIAINANY ny RARINY ANY AMIN’NY FITSARANA AMBONY Ampahany ny amin’ny Asa momba ny Fampitambarana ny Zavaboary ny Rariny any amin’ny Fitsarana Ambony (jolay)
Maneho ny fisaraham-panambadiana — Mpisolovava manam-Pahaizana manokana amin’ny fisaraham-Panambadiana ao anatin’ny fotoana Fohy
Ny fisarahana sy ny fisaraham-panambadiana maneho ny fotoana matanjaka ara-pihetseham-po ny adin-tsaina, tsy mahakasika afa-tsy ny vadiny saingy ny fianakaviana manontolo tarika Rehefa mitandrina ny famakafakana ny toe-draharaha, dia hametraka Anao eo mikasika ny tsara indrindra ny mpahay lalàna sy manam-pahaizana any an-tsaha, tsy misy vola fanampiny Isika dia manome antoka indrindra ny saina ho ny toe-draharaha ara-panambadiana mba miombon-kevitra aminao ny lalana tsara indrindra mba atao mba hiarovana ny tombontsoa sy ny fahamendrehana ny tenanareo sy ny zanakareo, ny fisarahana sy ny fisaraham-panambadiana dia miezaka hahatakatra ny toe-javatra manokana ary hanampy anao hanitsy rehetra ny fifandraisana, anisan’izany ireo fananany,
Izay vola fanampiana ny fikojakojana ny zaza, calculating ny vola fanampiana ny fikojakojana ny zaza, ny fikojakojana ny zaza ara-dalàna faha — Studio legale avv. Daniel Cibin — mpisolovava ao Milan
Ny sivily sendikà eo amin’ny olona mitovy fananahana: ny karatra vaovao momba ny toetra vaovao institute sy ny fitoviana sy ny fahasamihafana amin’ny fanambadiana. Ny lalàna momba ny ‘fisarahana’ fohy ny zava-misy ihany koa ny any Italia, nihena ho enim-bolana na iray taona ny miandry ny fotoana eo ny fisaraham-Varotra-nanampy ny fisarahana sy ny fisaraham-panambadiana (manoloana ny mpahay lalàna ary tsy misy antso ao amin’ny Fitsarana: ny didim-panjakana-lalàna dia nampidirina ny ivon-toerana. ny ray aman-dreny sy ny zanaka no manana ny marina foana ny mahay mandanjalanja sy mitohy amin’ny tsirairay amin’izy ireo ny fahazoana fitsaboana, ny fampianarana sy ny fanabeazana
Mpisolovava: hahazo refund ho an’ny ny carte fifanarahana amin’ny mpanjifa
Ny fitsarana voatendry ny mpisolo vava notendrena ho voampanga noho ny fitsarana ny fahefana ary toy izany koa, tsy toy ny mpampanoa lalàna dia tsy nifidy ny olom-pirenena. Mety hitranga izany ny voampanga ny mpisolovava efa voatendry no tsy mandoa vola noho ny mpampanoa lalàna, izay noho izany dia lasa tompon-trosa manoloana ny mpanjifa. Mba hahatakatra ny fomba tonga tao izany, dia tsy maintsy manomboka amin’ny ny fiheverana fa ny heloka bevava dingana, ny ara-teknika fiarovana dia tsy maintsy: ny olom-pirenena dia ahiana na ho heloka dia tsy maintsy manana mpisolovava. Ao ny raharaha tsy namaly ny fanasana ny mpitsara
Halatra tao amin’ny villa: efa-polo minitra ny fampihorohoroana, ny Mpisolovava, sy ny vadiny dia naka ny
ary ny vady natao ny sandry amin’ny sandry ny mpangalatra fa ny lehilahy amin’ny efitrano ao an-trano, satria tsy voalaza izay izy ireo no nitahiry ny vola sy sarobidy, dingana roa avy amin’ny Furnaces Tognana. Ny commando, rehefa nihorohoro ny mpivady, tao toy ny worthlessness hita ao amin’ny villa: vola, firavaka ary mijery ny lanjan’ny ny tompony, ao anatin’izany ny Rolex. Ny lanjan’ny ny mandroba, mbola ho refesina amin’ny fametrahana mazava tsara, dia ny am-polony maro ny an’arivony euros. izy ireo raha tsy hangalatra ny mpahay lalàna sy mpitsara, dia mba ho marina aho, dia tsy miala tsiny, ary raha
Ny lalàna momba ny zon’ny mpamorona, ny Fiaraha-monina italiana ny Mpanoratra sy Tonian-dahatsoratra
Izany no tsara fa ny mamela ny mpanoratra manana ny manokana ny asa, ny filazana paternity, mba hanapa-kevitra sy ny fotoana hamoahana azy ireo, ny fanoherana ny fanitsiana, ny manome alalana ny karazana fampiasana sy ny fandraisana ny mifandray amin’ny karama, ny karama noho ny olona iray izay no namorona ny asa — Lalàna ny fitsipika fananana ny zo manokana sy ny zo ny ny mpanoratra dia mampiasa ny fanohanana ny asany amin’ny fomba rehetra, mba authorise na inona na inona ny daholobe fanapariahana, miteraka, famonoana, solontena na endrika hafa fampiasana sy mahafantatra ny karama. Fantaro bebe kokoa ireo zo
Panjakana am-ponja (Isiraely)
Fitazonana vonjimaika dia ohatry ny fameperana ny olona fahalalahana ampiharina ho an’ny fiarovana ny antony. Ao amin’ny karazana Isiraely fepetra ity dia mifototra amin’ny Lalàna momba ny fahefana amin’ny firenena latsaka an-katerena) navoaka tamin’ny nandritra ny fe-potoana britanika ny Palestina, sy nasiam-panitsiana tamin’ny. Tamin’ny taona ny Knesset amin’ny fivoriana, dia nanasa ny Komity ho an’ny lalàm-Panorenana, ny Lalàna sy ny Fitsarana ny manomana ny volavolan-dalàna noho ny fanafoanana ny raharaham-panjakana am-ponja ny fototry ny fandikana ny fitsipika ara-demokratika. Ny fenitra dia tsy nasiam-panitsiana, ary dia mbola manan-kery. Araka b’tselem, ny Foibe, ny israeliana vaovao ho an’ny zon’olombelona, any amin’ny faritra
Ho an’ny fitantanana fandikàn-dalàna, araka ny italiana ny rafitra ara-dalàna dia midika hoe ny fanitsakitsahana ny fenitra ara-dalàna izay dia nametraka ny fitantanana tsara. Raha misy, na dia eo fragmentary lalana, ny teo aloha, ny lalàna, ny manam-pahefana fahaterahana sy tanteraka ny heloka ara-panjakana ny any Italia no azo apetraka amin’ny fidirana an-kery ny lalàna efatra amby roapolo novambra taona, no. Ny lalàna dia mampahafantatra ny rafitra nataon ny heloka sy ny sazy ara-panjakana, ny fanomezana ho an’ny fitsipika ankapobeny, ankoatra ny tranga miavaka, hoe azo ampiharina, sy ny fahaizany. Ny fitsipika nampahafantarina ny rafi-para-jiolahy, toy ny nosoritan’ny eo amin’ny
Ny faritra ara-panjakana ny fitsarana
Ny faritra ara-panjakana ny fitsarana (TAR), ao amin’ny fitsipika ny Repoblika italiana, ny taova ny fahefana ara-panjakana. Ny fitsarana mahefa hitsara amin’ny antso nitoetra manohitra ny fitantanana ny asa, dia ny olona heverina ho niharan — (amin’ny fomba tsy araka ny rafitra ara-dalàna) ao ny ara-dalàna liana. Izany no ara-panjakana ny fitsarana ambaratonga voalohany, izay didy mety ho niantso teo anoloan’ny Filan-kevitry ny Fanjakana. Noho ny antony mitovy, izany no hany karazana fitsarana manokana mba hanome afa-tsy roa degre ny fitsarana. Ny fametrahana ny ara-panjakana ny fitsarana ao amin’ny ambaratonga voalohany any amin’ny fari-pifidianana ao amin’ny faritra, dia envisaged ny
Ny singa fototra ny Mpitari-dalana azo Ampiharina ny volavolan-dalàna. tahirin-kevitra
Ny faktiora dia ny tahirin-kevitra navoakan’ny ireo izay mivarotra entana na asa. Ny fanajana ny fifanarahana ara-barotra amin’ny mpanjifa dia manome ny mpivarotra ny zo hanavotra ny vidiny voalaza. Ny faktiora tsy maintsy misy zava-dehibe ny toetra, napetraky ny lalàna, araka ny ho hitantsika etsy ambany. Ny fitsipi-pifehezana mikasika ny volavolan-dalàna no voarakitra ao amin’ny Lahatsoratra, Afa-tsy ny VAT (DPR). Art. blackjack dia nilaza fa tokony ho nalefa tany amin’ny faktiora ny olona izay manatanteraka ny raharaham-barotra ao amin’ny VAT ny fitondrana, anisan’izany ny Taxable varotra, afa-Miala amin’izany, ary miavaka tetika. Dia omena na izany aza anefa ny lalàna ny
Ny fikojakojana ny olon-dehibe ny ankizy
Ny adidy ho fanohanana ny ankizy dia voasoratra ao ny zava-kanto. sy ny ff c.c. ary, an-kolaka, amin’ny alalan’ny zava-kanto bis, paragrafy, c.c. mitaky ny ray aman-dreny ny adidy foana, hampianatra sy hanabe ny zanany, ny soso-kevitr’izy ny fironany sy ny faniriana ny zanany, arakaraka ny zavatra tsirairay, ary araka ny fahaiza-miasa, na ao an-tokantrano. Tsy misy fitsipika ao amin’ny karazana order izay manome ho an’ny toy izany manokana adidy ny ray aman-dreny mba hitsahatra amin’ny andro ho avy ny taona ny an ny zanaka ary ny, mandra-pahatongan’ny fotoana fohy lasa izay, mandritra izany fotoana izany, tsy nisy ny fitsipika
Izay isika — TSENA NY ZAZA — NY FIVAROTANA NY VAOVAO SY NAMPIASA TSARA ny ANKIZY
Ny tsena fa tsy mijaly noho ny krizy, fa ny ZAZA, ny fitafiana, ny kilalao sy ny fitaovana avy amin’ny ho efatra ambin’ny folo taona, dia samy ampiasaina sy vaovao, amin’ny entana tena notombohina tamin’ny vy Endrika vaovao, tsotra sy mifanaraka amin’ny zavatra ilain’ireo ny affiliates, mba hanao ny asa tsy fotsiny ny raharaha fa mahafinaritra
Ny fisarahana, ny fisaraham-panambadiana: fikojakojana ny zanany lahy ny taona, ka ny fony
Hatramin’ny fa-taona ny ray aman-dreny nisaraka na nisara-panambadiana, ary tsy maintsy mandoa ny fikolokoloana ny ankizy efa magiorenni. Ny fikojakojana ny olon-dehibe ny ankizy dia voasoratra ao amin’ny Lalàmpanorenana, izay milaza fa ray aman-dreny no manana adidy foana, hampianatra sy hanabe ny zanany arakaraka ny vola miditra sy ny fahaiza-miasa. Ny mpitsara, koa, mety manana ny fanajana ny olon-dehibe ny ankizy dia tsy mbola tena ampy ny fandoavam-bola ny cheque periodical teo amin’ny ampahany ny ray aman-dreny. Ity ny fikojakojana dia efa ho toy ny mbola ilaina, fa ny tena tsy ho ny fiainana manontolo Ny lalàna no manome fa
Ny olona tsy an’asa dia tsy maintsy foana ny ankizy
Tsy ny hanomezana ny fikojakojana ny ankizy: ny tsy fisian’ny fidiram-bola sy ny tsy fisian’ny asa dia tsy afa-tsy ny ray avy amin’ny fanamelohana. Diso ny mihevitra fa ny toetry ny tsy fananana asa waivers,»raha tsy misy asa»avy amin’ny adidy ara-tsosialy. Izany dia ho marina ihany koa vis-à-vis ny hetra manam-pahefana, fa tsy ny fianakaviana. Raha ny marina, na dia ireo izay tsy manana asa tokony hitandrina ny zanany mandra-ireo tonga ny fahaleovantena ara-bola (tsy voatery, avy eo, taorian’ny valo ambin’ny folo taona, nefa izy ireo raha tsy mahita asa marin-toerana). Ao ny raharaha ny fisarahana na ny fisaraham-panambadiana, ny
Ahoana no Hiditra ao amin'ny Fifanarahana ny zana-famelana: ny roa ambin ny folo Dingana